मनोरञ्जन होभरकम्पान - प्रतिक्रिया विश्वभरि सुरक्षा समाधानहरू
घर आवेदन मनोरञ्जन होभरक्राफ्ट
मनोरञ्जन होभरकम्पान - व्यावसायिक ग्रेड
Hov Pod मजा गर्दै हुनुहुन्छ - तपाईं कुनै पनि फ्लैट सतहमा हावाको तकियामा उड्न सक्नुहुन्छ, र कुनै पनि समस्या बिना भूमिबाट पानीको यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। हवाई कुशन निलम्बन धेरै सहज छ, विशेष गरी 4Xs, मोटरसाइकल र जेट स्किन्सको तुलनामा - तपाईलाई महसुस गर्नुहुन्न कि तपाई जिममा हुनुभयो वा ह्वो पोड घुमाउनुको लागी एक चिडियाघरको आवश्यकता पर्दछ। Hov Pod तपाईं हवा को कुशनमा लगभग कहीं पनि लिन सक्नुहुनेछ।
तपाईं एक डुङ्गामा फ्लोट गर्नुहुन्छ, ट्रकमा चढ्नुहोस्, तर सतह माथि माथि9इन्चको माथिल्लो स्थानमा ह्वो पोड - उडान गर्नुहोस्। Hov Pod मनोरञ्जन होभरक्राफ्टले काम गर्न सजिलो छ, बस हस्तक्षेप को उपयोग मा विमान को पछाडि पार को दिशा बदलन को लागि सिर्फ handlebars को उपयोग गर्नुहोस। एक बबल एयरमा फ्लोटिङ घर्षण कम हुन्छ, त्यसोभए तपाईं घुमाउन सक्नुहुन्छ, स्लाइड गर्नुहोस्, 180 घुमाउनुहुन्छ, 360 हरू पूर्णतया समुद्र तट माथि आइसक्रीम प्राप्त गर्न। कुनै प्रोपलरले क्षति पुर्याउन, समुद्री कछुए, वा चट्टानहरू वा कोरलमा घिमिरे हुन सक्दछन्, तपाईं ठाउँहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ कि डुङ्गाहरू, शरद भेडाबाट टाढा पुग्न सक्नुहुनेछ। होभ पोडले तपाईंलाई अपरिचित प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रमा उड्न अनुमति दिन्छ र तपाईंको तम्बूको पछि लागी शिविरमा फर्कन र पार्क गर्न अनुमति दिन्छ।
हव पोड मनोरञ्जन होवरक्राफ्ट को बदले मोटरसाइकलहरू, जेट स्केस, कारहरू, 4X4 ट्रकहरू, क्याम्पर्सहरू, मोटर नावहरू, टूर बसहरू, टूर नौकाहरू, मिनिभान्सहरू, एसयूवीहरू, रफ्स, कायाक्सहरू, क्यान्सर र स्नोमोबाइलहरू। हव पोड मनोरञ्जन, रोमांच, यात्रा, भ्रमण, छुट्टियों, हाप टापु र कुनै पनि असामान्य वा फ्लैट पृथ्वी बाहिरी इलाकामा क्रूजको लागि आदर्श छन्। होभ पोड सामान्यतया दुर्गम र अपरिचित ठाउँहरु को बक्स साहसिक अनुभव को बाहिर बाहिर प्रदान गर्दछ।
मनोरञ्जन हॉवरकम्पिक - एडभर्सिटी तर सुरक्षित र विश्वसनीय
होभ पोड मनोरञ्जन होभरकम्पले हाम्रो व्यावसायिक ग्रेड जस्तै हो र तिनीहरू विश्वमा सबैभन्दा टिकाऊ होभरक्राफ्ट हुन्। होभ पोडले बाढी भएको जमीन, चिसो, नदीबारी, उर्जा पानी / समुह क्षेत्रहरू, राप्ती, शङ्का समुद्र तटहरू, खुला पानी, घाँस, रेत, रेगिस्तान, स्विम्प्स, मार्शल्यान्ड, सामा, डाइमेन्ट बिरुवा, बर्फ, बर्फ, सडक माथिको नमक मार्साहरू, स्यान्डबैंकहरू, सडकहरू, वास्तवमा तीव्र गतिमा 45 माइलसम्म कुनै पनि फ्ल्याट सतह बिना जंगली जीवन वा पारिस्थितिकी प्रभावित।
हावा9इन्चको एक तकियामा होभ पोड होभरले पानी माथि, अस्पष्ट इलाका वा कुनै पनि ठुलो पृथ्वी बाहिरी सतहमा जान्छ। हव पोड मनोरञ्जन होवरक्राफ्टले एक3सीट संस्करण ह्वा पोड एसपीएक्स टीसी एक्सएनक्सएक्सपी, एक 65 सीटर द हव पोड SPX टीसीसी 4HP टर्बो र 120 सीट9हव पोड इन्फिनिटी 2017।
हव पोड मनोरञ्जन होभरकम्पिकले पूर्ण-समय सबै इलाका कार्यशालाहरू, किफायती, सजिलो, संचालित र प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न इन्जिनियर गरिएको छ। होभ पोड कम रखरखाव हो र अन्तिममा बनाइएको हो।
यो3सीट मनोरञ्जन होभरकम्प्ट धेरै लोकप्रिय रोक्सक्स 582 ईन्जिनियरिङ् द्वारा संचालित गरिएको छ, जसले माइक्रो्रोलाइट एभिएशन अनुप्रयोगहरूका लागि डिजाइन गरिएको उत्कृष्ट उच्च शक्तिको वजन कम गर्दछ। यो इन्जिनमा असफल-सुरक्षित उड्डयन अपरेशनको लागि जुलुस इग्निशन प्रणाली छ, त्यसैले अत्यन्तै विश्वसनीय छ।
मेरो घरपालुवा कुकुर निबन्ध क्यानाडाई फार्मेसीहरू अनलाइन सियालिस स्रोत प्रेप्रेस विशेषज्ञ पुनःसुरु सबजेसन शोकमेन्ट्स वियग्रा वैकल्पिक नवीनतम https://chicagocounseling.org/4852-write-my-paper-free-online/ पोषण अनुसन्धान शीर्षक विचारहरु लिंक अनुसरण गर्नुहोस् साइट जानुहोस् सस्तो रिपोर्ट घोस्टराइट साइट यूएसए नर्क कभर पत्र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होमवर्कले भिन्नहरूलाई घटाउन मद्दत गर्दछ पालना कसरी डेल्टा ब्लुज लेख्न https://web.ics.purdue.edu/~asub/?doc=thank-you-resume-samples वायग्रा सुपर फोर्स 100mg 100mg pills यहाँ क्लिक गर्नुहोस् उत्तम मद्दत निबन्ध e- वाणिज्य मामला अध्ययन http://www.cresthavenacademy.org/chapter/example-of-a-thesis/26/ http://jeromechamber.com/event/english-paper-research-topics/23/ साइट जानुहोस् विशेषज्ञ निबन्ध मद्दत यहाँ how to write my philosophy of education canine prednisone how to writeacollege report paper साइट पछ्याउनुहोस् ohio thesis database mla format opinion essay पेलोड
सर्तहरूको अधीन 912 पाउन्ड वा 412 किग्सको ओभर टेलिलोड
607 पाउन्ड वा 275 किन्गहरूको अप्टरमा पानी प्वाइलोडले शर्तहरूको अधीनमा राख्छ
नोट: केहि सप्लायरहरू पेलोडलोड मूल्याङ्कनहरूको बारेमा सस्तो आर्थिक हो भने, यदि तपाईं पानीको नजिक जान चाहानुहुन्छ भने सबै होभरकम्पले एक हाइड्रोप्टरलाई दबाउको रूपमा चिनिन्छ, र सामान्यतया 50% कम वजन लिन्छ जब पानीको सुरुवात हुन्छ (तुलनामा) भूमि)। Hovercraft आपूर्तिकर्ता कहिल्यै नसोध्नुहोस् - कितने सीटहरू? तपाईले घर प्राप्त गर्न सक्नु पक्का, सँधै पानी-पानी प्वाइललोड क्षमता जाँच गर्नुहोस्। यात्रीहरू र चालक, अतिरिक्त उपकरणको वजन जाँच गर्नुहोस्। केही परिस्थितिहरू पानी सुरू गर्न गाह्रो छ, जस्तै लोडिङ, हावाको बल, हावाको दिशा, र पानीको गहिराई - गहिरो पानीबाट सुरु गर्न सजिलो छ।
SPX हरु पहिलो 2005 मा पेश गरिएको थियो, र उच्च घनत्व पलिथाइल (HDPE) बाट निर्मित गरिएको छ। TCC संस्करण 2010 मा पेश गरिएको थियो, र थर्मल प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ जसले वजन घटाउँछ, र शक्ति र स्थायित्वमा सुधार गर्दछ। एचडीपीई ग्लास फाइबर मोडेल भन्दा धेरै बलियो छ, र सामग्री अत्यन्त उत्प्रेरित हुन्छ।
मानक रङ्गहरू नीलो, रातो, भित्री र पहेंलो हुन्छ। अन्य रंगहरू उपलब्ध छन्।
Hov Pod संसारको सबैभन्दा टिकाऊ होभरक्राफ्ट हुन्, हामी हाम्रो हिलमा5वर्ष वारंटी प्रदान गर्दछौं र भाग र श्रममा 12 महिनाको वारंटी।
2017 हव पोड SPX टीसीसी 120HP टर्बो
यो 3-4 सीटर मनोरञ्जन होवरकफ्ट धेरै लोकप्रिय पोलारिस 600cc क्लीनर 120HP संचालित इन्जिन द्वारा संचालित छ, वजन विशेषताहरु को शानदार उच्च शक्ति संग। यो इन्जिनमा रिमोट निदान सफ्टवेयर छ, र अत्यन्त विश्वसनीय छ।
सर्तहरूको अधीन 1077 पाउन्ड वा 487 किग्सको ओभर टेलिलोड
718 पाउन्ड वा 325 किन्गहरूको अप्टरमा पानी प्वाइलोडले शर्तहरूको अधीनमा राख्छ
Hov Pod संसारको सबैभन्दा टिकाऊ मनोरञ्जन होभरकम्प हो, हामी हाम्रो हिलमा5वारंटी वारंटी र एक 12 महिना वारंटी र भागहरूमा श्रम प्रदान गर्दछौं।
2017 हव पोड कार्बन इन्फिनिटी 750HP टर्बो
यो9सीटर मनोरञ्जन होवरक्राफ्ट धेरै लोकप्रिय पोलारिस 600cc क्लीनर 120HP संचालित इन्जिन द्वारा संचालित छ, वजन विशेषताहरु को शानदार उच्च शक्ति संग। यो इन्जिनमा रिमोट निदान सफ्टवेयर छ, र अत्यन्त विश्वसनीय छ।
सर्तहरूको अधीन 1492 पाउन्ड वा 675 किग्सको ओभर टेलिलोड
1105 पाउन्ड (आधा एक टन) को पानी प्वाइलोड वा 500 किन्ग नियमहरूको अधीनमा
2015 मा रिलीएको यो नयाँ मोडेल एचडीपीई ट्रिमको साथ कार्बन फाइबर / क्लरर कम्पोजिटबाट निर्माण गरिएको छ, हामी विश्वास गर्छौँ कि यो यो उत्पादनमा पहिलो उत्पादन होभरक्राफ्ट हो। तपाईं पहिले देखि नै कार्बन फाइबर को शक्ति र हल्का वजन संग परिचित हुन सक्छ, र यो कि बुलेट प्रूफिंग अनुप्रयोगहरुको लागि केयर को प्रयोग गरिन्छ को बारे मा जानिन्छ। यद्यपि नयाँ मोडेल, सबै इन्जिनियरिङ घटकहरू पहिले नै राम्रो तरिकाले स्थापना र सिद्ध, अवस्थित मोडेलहरूमा सामान्य।
रङ कार्बन फाइबर कालो हो। हामी छुट्याउन र अन्य रङ विविधता प्रस्ताव गर्न सक्छौं
मनोरञ्जन होभरक्राफ्ट पहुँच
सजिलो तैनाती: पारंपरिक वाहनों पछि पछाडि टाँस्न वा 45 दोस्रो छिटो सुरुवात ट्रेलर संग आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ शिल्प छिटो र सुरक्षित रूपमा कहीं पनि तैनात हुन सक्छ, र विशेष लैंप वा अपरेटरहरूको लागि पानीमा झुन्ड्याउन को लागी लन्च गर्नुहोस् र किनारामा फर्कनुहोस्।
सरल डिजाइन र नियन्त्रण: एक सरल एकल इन्जिन डिजाइन र सबै अनावश्यक लिफ्टहरु संग, ट्रिम लेवर आदि संग संयुक्त गुरुत्वाकर्षण को एक कम केन्द्र ले उत्कृष्ट गतिशीलता र धेरै सरल संचालन सुनिश्चित गर्दछ। सादगीको सादगीको अर्थ भनेको कम्तिमा अपरेटरको प्रशिक्षणले सबै अपरेटरहरूले केवल एक घण्टाको प्रशिक्षण पछि सञ्चालनको आधारमा बुझ्न सक्दछ। यसले बहु अपरेटरको प्रयोगलाई सक्षम बनाउँछ जहाँ अपरेटर विशेषज्ञहरूलाई पायलटहरूको आवश्यकता बिना हातमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ।
मनोरञ्जन होवरकफ्ट बनाम एक बोट
◊ नावहरूले सुस्त पानीमा सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्दैनन् वा पानीको बाहिरी बाधाहरू वा मलबे कहाँ छन्
◊ ज्वरो आंदोलन को बारे मा चिन्ता बिना किनारों मा किनार नहीं जा सकता - हव पोड मनोरंजक होवरक्राफ्ट गर्न सक्छन्!
◊ नावहरू लाई लंगर वा मोर वा पानी (एक जटिल र सम्भावित जोखिमपूर्ण प्रक्रिया) हटाउन आवश्यक छ - हॉवरकम्पलाई फर्काउन र पार्कमा "पार्क" गर्न सकिन्छ जुन पछि अर्को प्रयोग गरिन्छ।
◊ हव पोड मनोरञ्जन होवरक्राफ्टले सामान्य मोटर डुङ्गाको तुलनामा धेरै कम ईन्धन प्रयोग गर्दछ।
◊ नावहरू सतह छेउमा हल्लाहरू र प्रोभेलरहरू र पानी-प्रदूषणहरू निकाल्छन् - होभरकम्पले यी चीजहरूमध्ये कुनै पनि चीज छैन, उनीहरूले हानिकारक जगेडा नगर्ने वा पानीलाई प्रदुषित गर्दैनन्!
◊ नौकाहरु लाई लिपि आवश्यकता पर्दछ वा कडा राज्य निर्भर मार्फत सुरू गर्न कठिन सतहहरु लाई सुचारू गर्न। मनोरञ्जन हॉवरक्राफ्टले घास बैंक, माछा फ्ल्याट वा पानीमा लगभग कुनै पनि सतह भन्दा बढि क्षति पुर्याउन सक्छ, र पानीमा पुग्न को लागी सुरक्षित तल्लो किनारा वा मोडफ्लैट गर्न सक्दछ वा फर्कन सक्दैन।
एक होवरकम्प र समान आकारको डुङ्गाको बीच समुद्री हस्तान्तरण क्षमतामा केही फरक छ। राम्रो परिस्थितिहरूमा, एक डुङ्गाले भारी भार लिन सक्नेछ।
सबै भन्दा साधारण प्रश्न मान्छे को बारे मा पूछते हो Hov Pod मनोरंजक होवरकम्प "यो इन्जिन हुनेछ यदि इन्जिन रोक्छ?" - उत्तर YES हो, होभ पोड मनोरंजक होवरकम्प पूर्ण सकारात्मक उछाल छ र सुरक्षित रूप देखि पानी मा अनिश्चितकाल मा बंद गर्न को लागि (माछा पकडने र बस को आसपास तैरने लोकप्रिय गतिविधिहरू छन्)।
होभ पोड मनोरञ्जन होवरकम्प कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन एक डुङ्गा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूसँग एउटा नेभिगेशन अधिकार (र जिम्मेवारहरू!) छन् अन्य watercraft को रूपमा। टाइडल वाटर सामान्यतया स्वतन्त्र रूपमा नेभिगेबल हुन्छ, तपाईं नदीहरू (केवल जम्मा भाग बिना सहमतिमा) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा लिण्डहरू (सहमतिलाई आवश्यक हुन सक्छ) समावेश गर्नुहोस्।
मनोरञ्जन होभरक्राफ्ट प्रयोग
हाम्रो होभ पोड अनुभव हाम्रो सबैभन्दा रोमाञ्चक आउटडोर गतिविधिहरु मध्ये एक हो र amphibious र सबै इलाके भ्रमण को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प मध्ये एक हो।
मनोरञ्जन होभरकम्पानले पर्यावरण अनुसार उनीहरूको नियमन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, भूमि माथि सञ्चालन गर्ने एक होभरक्राफ्टलाई अफ-रोड गाडी भनिन्छ। पानी भन्दा माथि, तपाईंको शिल्प एक डुङ्गा जस्तो मानिन्छ।
सामान्य सडक-मार्गहरू सार्वजनिक सडक मार्गहरूमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। केहि नगरपालिकाहरूमा, एटीवीहरूको लागि केही नियमहरू लागू हुन्छन्।
एटीवी अपरेसन प्रतिबन्धहरू र उपकरण आवश्यकताहरू स्थानीय क्षेत्रीय कानुनीकरणको आधारमा होभरक्राफ्टमा पनि लागू हुन सक्छ। सार्वजनिक सडकमा (वा अन्धकार पछि) पछि काम गर्न तपाईंलाई हेडलाइटहरू (र कहिलेकाँही पूर लाइट) आवश्यक पर्दछ।
निश्चित हुनका लागि, तपाईंको स्थानको लागि "मोटर वाहन" र "पार्क र मनोरञ्जन" विभागहरूसँग जाँच गर्नुहोस्।
तथापि, तपाईंको लागि जंगलमा बाहिर, रेगिस्तानमा, प्रशीरीमा एक झीलमा, नदीमा पार, चावल paddies उथाइ पानी नेभिगेट वा अफ्रिकामा केही प्राकृतिक इलाका सामना गर्नु, सवारीको आनन्द। एचएन पोड हो, दुर्लभ यात्रा को लागि9इंच उडान को सतह को माथि को माथि माथि माथि सतह को माथि को माथि को अनुभव को लागि सुरक्षित तरीका छ कि आसानी देखि पानी, बर्फ, सैंडबैर्स र घासभूमि मा यात्रा गर्न सक्षम छ। यही कारणले मानिसहरु लाई दुनियाभर मा होभ पोड मनोरञ्जन होवरक्राफ्ट को उपयोग गर्दछ।
मनोरञ्जन होभरक्राफ्ट भिडियो
सबै भू-भागहरू जस्तै हॉवरक्राफ्टले दिनभरि दिनको सजायको प्रयोग गर्न धेरै बलियो हिल हुन सक्छ, बर्फ, पानी, मलबे, पत्थर, चट्टान, कुनै नराम्रो इलाका, बाक्लो र डिप सतहमा। हव पोड हल्क व्यावहारिक रूपमा अविनाशकारी हुन्छ र सबै अन्य होवरक्राफ्टलाई अगाडि बढाउँछ। SPX र इन्फिनिटीको हिलले5वर्ष वारंटी प्रदान गर्दछ।